Uluhlu lokuthumela kwelinye ilizwe kuGoogle Earth, ukusuka kwi-Excel, kunye nomfanekiso kunye nesicatshulwa esityebileyo-iGeofumadas
Ikhaya/Ukulanda/Uluhlu lokuthumela kwelinye ilizwe kuGoogle Earth, ukusuka kwi-Excel, kunye nomfanekiso kunye nesicatshulwa esityebileyo
Lo ngumzekelo wendlela i-Excel engathumela ngayo umxholo kuGoogle Earth. Ityala yile:
Sinoluhlu lwee-coordinates kwifomati ye-geographic format (lat / lon). Sifuna ukuthumela kuGoogle Earth, kwaye sifuna apho ukubonisa ikhowudi yenqaku lomdla, isicatshulwa esibhalwe ngqindilili, isicatshulwa esichazayo, ifoto yenqaku kunye ne-hyperlink ukuze ivule iphepha kwi-Intanethi.
Ngezantsi umzekelo wento esiyethembayo ukuyibonisa xa sichofoza kwinqanaba:
Ikhowudi yile: XL-3458
Kwaye oku sinethemba lokubona:
Indlu kaMnu Joaquín Gómez Padre, apho iYunivesithi yeSizwe yayiqala khona kwaye ibuye ibuyiselwe njengemyuziyam ekhuselwe yiNational Institute of Anthropology
Jonga iphepha kwi-intanethi
Nangona ithemplate iya kulayishwa, umoya wecatshulwa ukuchaza indlela yokwenza ngayo wena.
Into esihlala kuyo kukwenza iithegi ze-html kwiikholamu ezahlukeneyo ukuze sikwazi ukuvumelana: Ikhowudi yoku iya kuba:
<img src=”http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Casas_actiopan.jpg/800px-Casas_actiopan.jpg”ububanzi="144"ubude ="168">
<a href=”http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casas_actiopan.jpg">Jonga iphepha kwi-intanethi
Zonke iilebheli Ukubonisa ukuba ngumgca owahlukileyo, ovala nge elingana no-Enter.
Ke iileyibhile ukubonisa ukuba lo mbhalo ubhalwe ngqindilili, ewe, uwuvala nge
im iilebula yomfanekiso, ophakathi ngaphakathi uphethe iipropati ezifana nobubanzi (ububanzi), ukuphakama (ukuphakama) kunye nesalathiso apho umfanekiso (src)
Okokugqibela kukho ileyibheli yehyperlink, evula ngayo
Into ephawulwe ngombala obomvu yinto enokutshintsha ngomfanekiso ngamnye, ngoko siya kuba nomdla emva koko siyeke kwiiseli.
Ngaphandle kokubuya okukhulu, unokwazi ngoko ukuba umsebenzi we-concatenate uza kushwankathela kwinto efana nale:
= QHUBEKA(,CELDA,,CELDA,,CELDA,<img src=”,CELDA,”ububanzi=",CELDA,"ubude=",CELDA,"><a href=”,CELDA,>>,CELDA,)
Oko kuthetha ukuba siza kuhlala kwiikholamu ezisi-8 ukugcina yonke idatha esifuna ukuyibonisa. Nangona kwimeko yabo baneelebhile ezisebenzisa isimboli kunye nezicatshulwa eziphindwe kabini, kunzima kuthi kuba kwi-Excel eyokuqala ibonisa umsebenzi kwaye eyesibini isetyenziselwa ukwahlula umxholo. Oku kusonjululwa ngokubeka imixholo kwiiseli ezahlukeneyo ngokungathi ngumbhalo.
Ekugqibeleni sinakho oku:
Kwaye ukuthumela kwiGoogle Earth ndibeke iqhosha elenza ifayile. Kulapho uchaza indlela apho ifayile kunye negama okulindele ukuba ube nencazelo ye kml xa iboniswe kwipaneli ekhohlo.
Itemplate inemouse ngaphezulu kweselfowuni ukucebisa ukuba idatha kufuneka ifakwe njani. Ngokubanzi, ihlala inengxaki xa ii-macros zingenakwenziwa kwaye xa indlela yefayile eyenziwayo ingabhalwanga.
Kukho esinakho, unokukhangela ngekhowudi kwibar yebhedi yeGoogle Earth, kwaye ukucofa kwinqanaba liboniswa njengoko silindele.
Ukukhuphela umzekelo kml
Ifuna igalelo lokomfuziselo lokukhuphela, onokwenza ngalo Paypal okanye kwikhadi lekhredithi.
Sele ndiyikhuphele itemplate, ndiza kuyifunda kwaye ndiza kubhala nayiphi na imibuzo okanye uhlengahlengiso. Enkosi g '
Sikulungele ukulungisa ikhonkco.
Andiboni ikhonkco ukwenza inkokhelo ngokudluliselwa kwebhanki. Ndivela e-El Salvador. Ndiyabonga
Ndandifuna ukuthenga ithemplate kodwa andinayo ikhadi njengami
Khangela, uqinisekile ukuba ubeka iqhosha elichazayo. Lo ngumzekelo:
URuben Alfredo uthi:
Landa ifayile ye-Excel, kwaye ndinzima ukulayisha iifoto kwidisk disk D: / obras / alc, nceda undithumele ingcaciso njengoko ndiyakwazi ukulayisha iifoto ezivela kule dilesi.
Ngaba kuyimfuneko ukuba iifoto zibe nobukhulu abathile? okanye ungasebenzisana ne-4 photos mb
Ewe, ngokwenene unokufumana iindlela zendawo kwikhompyutha okanye kwinethiwekhi
Kucinganiselwa ukuba kunokwenzeka ukufunda imifanekiso egcinwe kwindawo yePP okanye usebenzisa ii-network drives. Ndiyabonga
Ngaba le sicelo ingafunda imifanekiso egcinwe endaweni ngaphandle kokusebenzisa i-URL?
Sawubona, ndinomdla ekuthengeni iikhomplathi zakho. Ndivela ePeru, kodwa xa ndikunika kwikhonkco yokudlulisa i-akhawunti yebhanki, andifumananga nantoni na.
Sizisola ngesiganeko, kodwa sele sisisombululo kwaye inkqubo yokuhlawula isele inikwe amandla.
I-macro ayinayo ikona yokukhusela, ngoko ingatshintshwa.
Ukukhuphela kubandakanya ukukwazi ukuguqula ifayile yomthombo okanye i-macro ebalulekileyo yale program ekugqibeleni.
Akusilo ukuhluleka kwedatha, kukuthi umfanekiso weGoogle uchithekile
Ewe, i-datum enayo kwiGoogle Earth yiWGS84.
Ngaba ufumene isizathu sokwehluleka kwedatha yam?
Bathumele kwiofisi yokuposa ukuze babone. Ndithumele itafile ku-Excel kunye nefayile ye-kml eyenza. editor@geofumadas.com
Khangela ukuba usebenzisa iDatum, i-Google Earth isebenzisa i-UTM WGS84.
Enkosi ngesantya kwisisombululo esisebenzayo. Nangona kunjalo, xa ndiqhuba ifayile ye "kml" ngeGoogle Earth, phantse akukho nanye yamanqaku alungelelanisayo avelayo kwaye bambalwa kuphela ababonwayo, phantse isoloko ingowoku-1 nowokugqibela kolu thotho, kodwa kude kakhulu noko kuhambelanayo (100 Kms. pe ) . Ndidikwe kukwenza itests akhonto. Ngaba ndingakuthumela ifayile enedatha elayishiweyo kwenye i-imeyile? Ngoko ubuya kubona ukuba kwenzeka ntoni. Enkosi,
Le ngxaki eyaziwayo, njengoko kubhaliwe ngasentla.
Shintsha indlela, ubeka ifayile ngqo kwi C: kwaye loo nto ayivunyelwe yi-Windows ukumiswa. Sebenzisa enye indlela uze uqinisekise ukuba ikhona.
Iprogram ibonakala inkulu kum kwaye ininzi indleko yokuyifumana.
Ndiyifumene nentlawulo ye-2 $ kodwa kuvela ukuba xa ndiyifeza ayisebenzi kwaye isixwayiso siphumela sathi:
“Impazamo yexesha lokusebenza '75' yenzekile.
Indlela okanye impazamo yofikelelo lwefayile”
Ndiya kuqonda ukuba unako ukumxelela indlela yokuyicombulula okanye ukuba ungithumelele enye ifayile ye-Excel, ngokukhawuleza, ngenxa yokuba kufuneka ndilungise umsebenzi wokumelwa kwamanqaku asekuhlaleni kwaye ndiphulile.
Ukuba uphumekile kwiimitha ezimbalwa (i-10 ukuya kwi-15 metres) kuba imifanekiso yeGoogle iyafuduka, unokubona ukutshintsha umfanekiso kuminyaka edlulileyo kwaye uya kubona ukuba i-georeference imbi kakhulu. Nangona ulungelelaniso luchanekileyo.
Ukuba ukufuduka kubanzi, kubakho ukuba zilungelelaniswa kwenye i-Datum. I-Google isebenzisa iWGS84.
Ukuba izilungelelaniso ziwela kwenye indawo yeplanethi, mhlawumbi ukuba ungena ngaphaya kwebala nobude. Okanye awusebenzisi umqondiso: Kwi-western hemisphere ubude abubi, kwi-southern hemisphere i-latitude ayibi.
Igalelo elilungileyo kakhulu kuphela ukuba uyaqaphela ukuba xa ndibeka indawo yam yokudibanisa ayibonisi ngqo ukuba iphi ... kutheni ucinga ukuba iya kuba?